Turjubaanka Odisha Spritual Tour | Booqo macnaha quruxda badan ee Odisha
Odisha waa dhul ladnoolaji ah oo niyadjab leh, iyo habka ugu wanaagsan ee la kulmi karo taas oo ka badan safaradda ruuxiga ah ee Odisha. Sandbaalada cagaaran ayaa had iyo jeer ku nuuxnuuxsaday muhiimadda qotoda dheer ee dalxiiska ee caanka ah ee ka soo jeeda Odisha. Jilayaasha quruxda badan ee Gobolka ayaa lagu soo bandhigay xirmooyinka dalxiiska ee khaaska ah oo ay sameeyeen shirkadda. Xidhmooyinka ayaa si cad u muujinaya aragtida ruuxiga ah ee Odisha. 'Odisha Tour with Temples' dhab ahaantii waa waayo-aragnimo nololeed oo ay bixiso Sand Pebbles. Bandhigga 'Bhubaneswar Special Tour' wuxuu soo jiitaa dalxiisayaasha si ay ugu riixaan lakabka ruuxiga ah ee ka soo baxa magaalada caasimadda. Sidoo kale sidoo kale waa xirmooyinka kale ee madadaalada ah ee ruuxiga ah ee ku yaala safka Puri, Konark, Chilika, Bhitarkanika, iyo Similipal. Xidhmada Puri-Mangalajodi-Gopalpur-Chandragiri iyo Bhubaneswar - Puri - Barkul - Gopalpur - xirmo ayaa sare u qaadaysa ruuxa dalxiisayaasha. Xarumaha dalxiiska ee xasiloonida ee Kolkata - Gangasagar - Sundarbans ayaa sidoo kale lagu farsameeyaa si ay u sameeyaan safar aad u xooggan oo Hindiya ah.
Sanduuqa ceelka waxay ku dadaalaan si kasta oo ay ugu kalsoonaadaan si ay u hubiyaan in dalxiisayaashu helaan fursado balaadhan si ay ugu furtaan isbeddelkooda gudaha iyo inay helaan khibrad indho-furan oo ku saabsan baayacmushtarka safarka ee ruuxeena. Sanduuqa Qumaanka ee caleemaha ma baxo dhagax aan la furin si loogu soo bandhigo dalxiisayaal si ay ugu farxaan iyaga oo u soo maraya dalxiisyada dalxiiska ee dalxiisayaasha ee caan ka ah Odisha